Wasaaradda Warfaafinta oo shaqada ka joojisay laba Hay’adood ka howl-gala Soomaaliya (Doc's) - Awdinle Online
Wasaaradda Warfaafinta oo shaqada ka joojisay laba Hay’adood ka howl-gala Soomaaliya (Doc’s)
November 12, 2019 (Awdinle Online) – Wasaaradda Warfaafainta Soomaaliya ayaa hakiyey shaqooyinkii ay dalka ka hayeen laba hay’adood oo kala ah Media Ink iyo Perspective Media, kuwaas oo ka mid ah hay’adaha ka howlgala Soomaaliya.
Wareegto uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa lagu shaaciyey in la hakiyey shaqooyinkii ay dalka ka hayeen labadaasi hay’adood
Sababaha shaqada looga hakiyey labada hay’adood ayaa waxaa lagu sheegay inay raaci waayeen nidaamka ay wasaaraddu u dejisay hay’adaha ka shaqeeya warbaahinta ee ku sugan gudaha dalka.
Labada warqadood ee lagu kala ceyriyey labada hay’adood si faah-faahsan looguma sheegin qaladaadka ay sameeyeen ee tilmaamaya inay jebiyaan xeerkii wasaaradda.
Hay’adaha Media Ink iyo Perspective Media ayaa waxaa ay ka shaqeeyaan arrimo la xiriira dhinaca warbaahinta, iyaga oo xaruumo waaweyn ku leh magaalooyinka Nairobi ee dalka Kenya iyo magaalada Hargeysa ee Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee wasaaradda warfaafinta ayaad moodaa in ay awood u adeegsaneyso hay’addahan laga qorey warqadaha lagoo joojinaayo shaqada.
Previous articleMadaxweyne laftagareen Oo Degmada Waajid ku Dhegax Dhigay Dhismayaal cusub:- (Sawiro)
Next articleFARMAAJO OO KHUDBAD KA JEEDIYEY SHIRKA HORUMARKA IYO DADWEYNAHA:- (Sawiro)